Anigu waxaan ahay Cisco I-Prize Final - Fadlan Taageer Fikradeena | Martech Zone
Jimco, Abriil 4, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Inta badan maahan in fursad sidan oo kale u dhacdo - fursad lagu guuleysto $ 250,000 oo lala shaqeeyo shirkad sidan oo kale ah Cisco si aad fikraddaada u noqoto mid dhab ah!
Kahor intaadan aqrin, waxaan isticmaali karnaa taageeradaada. In kasta oo dalabkeennu gaadhay Finalka, haddana waxaannu si fudud ugu iftiiminaynaa codadka. Haddii codbixintu wali furan tahay, waan jeclaan lahayn haddii aad isdiiwaangelin lahayd oo aad noo codayn lahayd:
Isdiiwaangeli websaydhada I-Prize ee Cisco
Soo gal oo guji "Kobcinta" fikradda SaaS POS.
Waa maxay I-Prize?
Guji iyada oo loogu talagalay Cisco I-Abaal marin video
Waxaan ka shaqeynayay warshadaha makhaayadaha waqti dheer hadda si aan u ogaado in mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee maqaayadaha ay la macaamilaan ay tahay awood u helidda iyo korsashada tikniyoolajiyada si fudud oo rakhiis ah. Runta haddii loo sheego, warshaddu waa mid qadiimi ah… Nidaamka Iibinta Nidaamka Iibinta ayaa ku kici doona in ka badan 10% kharashka shirkadaha bilowgooda iyo awoodaha nidaamyadu aad ayey u xaddidan yihiin.
Shirkadda aan hadda u shaqeeyo waxay hormuud ka noqotay isku-darka Dalbashada Onlineka ee nidaamka POS. Laakiin waa tartan aan caadi ahayn. Nidaamyada POS waa, ugu yaraan, toban sano oo ka dambeeya tiknoolajiyadda oo aan si buuxda loogu diyaarin e-commerce iyada oo loo marayo webka. Halkii ay u furi lahaayeen nidaamyadooda isdhexgalka qadka, shirkadaha POS waxay hada ubaahan yihiin qarash dheeraad ah oo shatiga ah oo leh astaamo aan la isku halleyn karin oo aan dhameystirneyn, taas oo madax xanuun dhab ah u keeneysa shirkadaha aniga iyo sidoo kale maqaaxiyaha.
In kasta oo codsiyada Xafiiska, Codsiyada Email-ka iyo Nidaamyada Maareynta Xiriirka Macaamiisha ay u guureen Software-ka Adeeg ahaan, nidaamyada POS ma aysan noqon oo waa fursadda ugu horreysa ee hadda in shirkado badani ay ku dadaalayaan qaadashada xalalka martigelinta. Aniga oo taas maanka ku haya, ayaan fikradayda ku soo qoray websaydhka Cisco, SaaS POS. Fikradda ayaa ah in laga qaato barnaamijka hadda jira ee POS lagana maamulo internetka halkii laga qaadan lahaa qalabka POS.
Faa'iidooyinka ayaa badan - is-dhexgalka ku-dalbashada khadka tooska ah waxay noqoneysaa mid aan hagaagsaneyn. Sidoo kale, fursado cusub ayaa soo ifbaxaya, sida mushahar bixinta, bangiyada, is-dhex galka suuqgeynta iimaylka, is-dhexgalka mobilada, xitaa sahayda alaabada (marka ay dhammaato kalluunka salmon waxay soo saartaa digniin weydiisaneysaa maareeyaha inuu dalbado wax badan. Wuu oggolaaday oo amarka ayaa elektiroonig ahaan loogu diray).
Cisco runti waxay na siisay halkan fursad aan caadi aheyn waana jeclaan lahaa inaan arko fikradda oo miro dhalaysa. Ma aaminsani inay jirto shirkad ku habboon inay ka caawiso horumarinta iyo soo bandhigida fikrad sidan oo kale ah suuqa. Kaabayaasha shabakada ee loo baahan yahay, amniga, tikniyoolajiyadda macaamiisha khafiifka ah… kuwan oo dhami waa xoogga Cisco!
Isha ku hay Blog-ka I-Prize ee Cisco faahfaahin dheeraad ah.
Ha iloobin inaad fikraddeenna kor u qaaddo !!! Kooxdu waxay ka kooban tahay aniga, Bill Dawson, Carla Ybarra-Dawson iyo Jason Carr.
Tags: Ciscocisco i-abaalmarincisco iprize
Apr 4, 2008 at 6: 25 PM
Waxaan ku dhajiyay kor u qaad! Waxaan rajeynayaa inay shaqeyso.
Apr 4, 2008 at 6: 38 PM
Aad baad ugu mahadsantahay taageeradaada, Shawn! Waxaan u maleynayaa inaan helnay codsi macquul ah oo leh fursado badan oo aan ku badalno muuqaalka. Uma muuqan inaan dareen badan ka helnay meel ka baxsan garsoorayaasha, in kastoo, sidaas darteed, waxaan isku dayayaa inaan durbaano codadka qaar.
Waan kaa mahadcelineynaa taada!
Apr 5, 2008 at 8: 55 AM
Waxaan ku qaatay 10-kii daqiiqo ee la soo dhaafay inaan iskudayo xisaab ka sameynta goobtaas oo aan kuu codeeyo. Markii aan dhaafay shuruudaha waallida ah ee erayga sirta ah, waxaan sii waday helitaanka shaashadda qaladka ASP markaan isku dayo inaan gudbiyo.
Mar labaad ayaan isku dayi doonaa mar dambe waxaana rajeynayaa inaan soo galo! Waan ka xumahay!
Apr 5, 2008 at 9: 13 AM
Aniguba sidoo kale waxaan qabaa fikraddu inay tahay mid heer sare ah. Intuit waxay tan ku sameysay barnaamijka xisaabinta dhowr sano ka hor waana qalab weyn oo loogu talagalay maqaayadaha.
Nasiib darrose, uma maleynayo inaad adigu tahay qofkii ugu horreeyay ee kobciya fikradda noocaas ah. Waan ogahay dhowr shirkadood oo ka shaqeynaya fikradda hadda. Aniguse, waan kuu codeyn doonaa. Awoodda iyo ilaha Cisco aad ayey uga badan yihiin dhammaan nidaamyada makhaayadaha POS marka la isku daro!
Apr 5, 2008 at 11: 05 AM
Waxay u egtahay wax wali ubaahan doona waxqabad macmiil-dhinac muhiim ah, laga yaabee inaad isticmaasho Adobe AIR? Miyaanay taasi ahayn Cisco-ish ku filan?
Apr 5, 2008 at 11: 16 AM
Mike - waad saxan tahay, bakhaarka macluumaadka maxalliga ah waa qasab haddii ay dhacdo in isku xirnaanta ay hoos u dhacdo. AIR dhab ahaantii waxay ahayd dhiirrigelinta go'aaminta in tani ay macquul tahay iyo in kale. AIR ayaa hubaal samayn laheyd khiyaanada, laakiin haddii Cisco ay soo saarto macmiil khafiif ah, taasi waxay u badan tahay inay sidoo kale u shaqeyn laheyd!
Apr 6, 2008 at 3: 42 AM
Tani waa wax weyn - nasiib wacan. Markaad guuleysato, waxaan jeclaan lahaa wareysi goobtayda 😉